ကိန္နရီကျွန်းများရှုခင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 1 နှင့် 2
မေးခွန်း ကိန္နရီကျွန်းများရှုခင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 1 နှင့် 2
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #547 by janroth
ငါဒေါင်းလုပ်လုပ်နှင့်နေရီကျွန်းစုရှုခင်း part1 နှင့်2installed ပါပြီ။ ကျွန်မနှင့်အတူပျံစတင်ခဲ့သည့်အခါပထမဦးဆုံးအစှဲ FSX , La Palma (GCLA) မှာရေနွေးငွေ့ Edition ကိုကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလွန်ကောင်းတဲ့ရှုခင်း !!
အဲဒီနောက်ပိုပြီးလေဆိပ်ကြိုးစားခဲ့နဲ့ကျွန်မငါသည်သင်တို့၏အကူအညီဖြင့်ဖြေရှင်းချင်ပါတယ်ထားတဲ့အချို့သောပြဿနာများကြုံတွေ့။ Tenerife တောင်ပိုင်း (GCTS) ၏လေယာဉ်ပြေးလမ်းတွင်လေယာဉ်ပြေးလမ်းတောင်များအချို့အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ကိုတက် pop နှင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်းပိတ်ဆို့ဟန်ကြောင့်, ရှုခင်းနှင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်းအကြားအမြင့်ပြဿနာသို့မဟုတ်ပဋိပက္ခရှိပုံ ?? ငါတောင်တော်မှတဆင့်တက္ကစီတဲ့အခါမှာလေယာဉ်ပြေးလမ်း၏ကျန်ကထိပ်ပေါ်မှာဒြပ်စင်အပေါငျးတို့သမျိုးနဲ့အတူပေါ်လာလိမ့်မယ် ?? ငါလေထဲကလေဆိပ်မှကြည့်ရှုသောအခါ, တိုင်းအရာအဆင်ပြေဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲတူညီတဲ့ပြဿနာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los ကောင်ဘွိုင်ပွဲ (GCXO) ၏လေယာဉ်ကွင်းပေါ်တွင်တွေ့ကြုံတတ်၏။ တစ်ခုမှာနောက်ဆုံးမှတ်ချက်: Gran Canaria (GCLP) ပေါ်တွင်ပြေးလမ်းအလွန်အခြေခံကြည့်ရှုပါ။ အဘယ်သူမျှမလေယာဉ်ပြေးလမ်းနံပါတ်နှင့် left နှင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်း၏ညာဘကျမပါအဖြူအစင်းရှိပါသည်။ အဆိုပါလေယာဉ်ပြေးလမ်းရုံအနက်ရောင်လိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါကအခြေခံ flightsim လေယာဉ်ပြေးလမ်းရူပထက်အများကြီးလျော့နည်းသည်။
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #550 by janroth
လေဆိပ် GCTS နှင့် GCXO နှင့်အတူပြဿနာများ GCTS နှင့် GCXO များအတွက်လေဆိပ်မြင့်တက်မှန်ကန်သောကို disable ဆိုလိုသည်မှာလျှောက်ထားသည့် ORBX Vector Configuration tool ကို run ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီ။ အကြွင်းအကျန်လေဆိပ် GCLP ၏ပြေးလမ်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြစ်ကြောင်းတစ်ခုတည်းသောပြဿနာ။ ငါသညျဤအဘို့သင့်အကြံပြုချက်များမျှော်လင့်နေပါတယ်။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: James6
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #551 by janroth
Rikooo ထံမှ Gran Canaria လေဆိပ် (GCLP) ၏ရှုခင်းကို install ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းပြဿနာ။ အဆိုပါရလဒ်အကြီးအကြည့် !! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။